ऋण तिर्न नसकेपछि सहकारीको भयो रामकृष्ण ढकालको घर
काठमाडौं, १५ असार । नेपाली सांगीतिक फांटमा केही वर्ष अघिसम्म एकछत्र राज गरेका रामकृष्ण ढकालको स्थिति यतिबेला आफैले गाएको गीत ‘ओराली लागेको हरिणको चाल भो’ भनेजस्तै हुन पुगेको छ । भर्खरै मात्र उनले एक...
वरिष्ठ कलाकार नीर शाहलाई हृदयाघात, अझै अचेत
काठमाडौं, १५ असार । वरिष्ठ कलाकार नीर शाहलाई हृदयाघात भएको छ । शनिबार दिउँसो १२ बजेतिर बेहोस भएपछि हृदयाघात भएको आशंकामा बांसबारीस्थित गंगालाल अस्पताल पुर्‍याइएका शाह अझै अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ । शाहलाई सीसीयुमा राखेर...
राजधानीमा तेरिया मगरलाई भव्य सम्मान
काठमाडौं, १५ असार । जी टीभीबाट प्रशारण हुने डीआइडी लिटिल स्टारको उपाधि जितेकी वुटवलकी तेरिया मगरलाई काठमाडौंमा भव्य सम्मान गरिएको छ । ललितपुरको बालकुमारी ग्वार्कोमा आइतबार लुम्विनीवासीका तर्फबाट आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान एवं स्थानीय विकास...
श्रीकृष्ण र स्वेताको विहे असार २३ गते
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रका कलाकारहरुको विवाहको लगन जुर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । केहि महिना अगाडि मात्र नायक आर्यन सिग्देल, नायिका रेजिना उप्रेती, मोडल अन्जु निरौला,महानायक राजेश हमाल जस्ता नेपाली चलचित्रका चर्चित...
हिरोइन बनाइदिने भन्दै फिल्म निर्देशकले ठगे प्रेमिकासँग ६ लाख !
काठमाडौं । अघिल्लो वर्षको ब्लकबस्टर फिल्म ‘होस्टेल’का निर्देशक हेमराज विसीले मंगलबार आफ्नो दोस्रो प्रोजेक्ट ‘सम्बोधन’को फस्टलुक पोस्टर रिलिज गरे। त्यसैले आजको दिन उनको निकै सुखद हुनु पर्ने हो। विडम्बना यो सुखद पलमा पनि उनी रमाउन पाएनन्।...
नायक जीवनलाई हत्याको आरोप !
काठमाडौं । नायक जीवन लुँइटेललाई नेपाली फिल्म क्षेत्रमा चकलेटी नायकका रुपमा चिनिन्छ। सोझा र इमान्दार अनि बौद्धिक शैलीका यी नायकले कसैको हत्या गरेको कुरा सुन्दा आम दर्शकलाई आश्चर्य र अचम्म लाग्छ। यिनै नायकलाई अहिले...
दीपाश्री भन्छिन् ‘मलाई छोरी मनपर्छ’
काठमाडौं । चर्चित हाँस्य टेलिश्रृङ्खला ‘तितो सत्य’मा अभिनय गर्ने कलाकार कविता शर्माले सोमबार आफ्नो फेसबुकमा श्रृङ्खलाकी निर्मात्री तथा प्रमुख कलाकार दीपाश्री निरौलाले बच्चा खेलाउँदै गरेको तस्वीर राखेर प्रश्न गरिन्,‘आखिर किन दीपा बच्चासँग रमाउँछिन् ?’...
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको छोरी मालिया हलिउडमा अनुबन्धित भएकी छिन् । ओबामाकी जेठश्र छोरी मालियाले हलिउडकी नायिका हेले बेरीको साई–फाई सिरिजको आउने फिल्ममा प्रडक्सन असिस्टेन्टको रुपमा काम थालेकी हुन् । राष्ट्रपतिको छोरी भएपनि फिल्ममा...
तितो सत्यमा धुमुर्सको केपी ओली रुप
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा अहिले आउन लागेको नेकपा एमालेको महाधिवेशनको चर्चाले राम्रो स्थान पाईरहेको छ। पार्टीको अध्यक्ष बन्न वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली कम्मर कसेर लाग्दै एकापसमा कटाक्ष प्रहार गरिरहँदा नेपाल...
बन्ने होइन त टिनएजर सुन्दरी ?
काठमाडौं । युवावस्थाका किशोरीमा निहित क्षमता र प्रतिभा उजागर गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको ‘मिस टिन आइडल २०१४’ को आवेदन फाराम खुला गरिएको छ। एक्सन इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगीतामा १५ देखि १९ वर्ष...
प्रियंका सेक्सी बिकिनी बेब
बलिउडमा नायिका दीपिका पादुकोणलाई सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने नायिकाका रुपमा चिनिए पनि सेक्सी नायिकाको मामलामा दीपिका भन्दा प्रियंका चोपडा निकै अगाडि रहेकी छन्। हालै सार्वजनिक गरिएको एक सर्वेक्षणमा प्रियंकाले ‘सेक्सी बिकिनी बेब’को सूचीमा दीपिकासहित...